Umhlaziyi uthi kungasimama iRandi uma kuketulwa uZuma | isiZulu
Umhlaziyi uthi kungasimama iRandi uma kuketulwa uZuma
I-ANC eKZN ayiyizwa kahle oyokuba uZuma ehle esikhundleni
OLUKHETHEKILE: Ongqongqoshe abathathu bacela umengameli Zuma ukuthi ehle
UZuma ufuna uMadonsela athweswe icala
Cape Town – Omunye wabahlaziyi bezepolitiki uthi iRandi lingasimama uma ngase iqembu elibusayo, i-ANC, lisuse esikhundleni uMengameli wezwe, uJacob Zuma.
Lokhu kuza ngemuva kokuvela kwezindaba zokuthi iNational Executive Committee (NEC) ye-ANC izonquma ngevoti ngokuthi kuxoshwe uZuma ngoMsombuluko.
Umhlaziyi wezepolitiki, uDaniel Silke, utshele iFin24 ukuthi ukugudluzwa kukaZuma kungaba nomthelela omuhle emandleni erandi futhi “lingaqina mbijana”.
OLUNYE UDABA: OLUKHETHEKILE: Ongqongqoshe abathathu bacela umengameli Zuma ukuthi ehle
USilke uthi lokhu kungaholela ekutheni irandi ligcine selibiza u-R13.50 uma liqhathaniswa neDollar laseMelika.
“Ekugcineni, ukuhoxiswa kwaZuma kungabonwa yizimakethe njengokuhle, nokungaholela ezinguqukweni ezisheshayo ngasohlangothini oluqinile,” kusho lo mhlaziyi engeza ngokuthi noma kunjalo kusadingeka ukuba kube nenqubomgomo eqinile kanye nozinzo kwezepolitiki ngale nje kokuhoxiswa kukaZuma ukuze kube noshintsho olubonakalayo noluzoba khona isikhathi eside.
Lo mhlaziyi usho kanjena nje alaziwa ikusasa laMengameli Zuma njengoba ngaphambilini kuye kwabikwa ukuthi amalungu amathathu eKhabhinethi yakhe aye amcela ukuba ashenxe esikhundleni nalapho ethole (amalungu) khona ukwesekelwa uSotswebhu we-ANC, uJackson Mthembu.
NgoMsombuluko iNews24 ibike ukuthi uNgqongqoshe wezokuVakasha, uDerek Hanekom, owezeMpilo, u-Aaron Motsoaledi kanye nowezokuSebenza koMphakathi, uThulas Nxesi, yibona abacele uZuma ukuba ashenxe esikhundleni ngempelasonto.
Kusolwa ukuthi udaba lo muzi kaMengameli oseNkandla, ukwehla kokwesekwa kwe-ANC okhethweni lohulumeni basekhaya kanye nobudlelweno anabo nomndeni wakwaGupta, ngezinye zezinto ezibekwe njengezizathu zokuthi uMengameli Zuma ehle esikhundleni.